Imbwa yeRottweiler yakadii: hunhu, mutengo, maitiro ... | Imbwa dzepasi rose
Iyo Rottweiler imbwa hombe ine hura iyo, kunyangwe hazvo kwekuti kwemakore uye nanhasi anga aine mukurumbira wakashata wekutorwa sembwa ine njodzi, chokwadi chinopfuura fungidziro, nekuti chero imbwa inogona kuva imbwa inoyevedza kana Chitima neruremekedzo, moyo murefu uye rudo, kusanganisira izvo zverudzi urwu.
Iyi imbwa inogara ichida kushanda. Ichi chishuwo chekufadza munhu chakachiita chimwe chembwa dzinodiwa zvemauto nevachengeti. Neichi chikonzero, iri furry iro rinogara zvakanaka zvinoshamisa nemhuri dzinofarira kurovedza muviri mazuva ese, sezvo iine simba rakawanda. Tizivise iri sei imbwa ye rottweiler.
1 Rottweiler imbwa hunhu
2 Maitiro uye hunhu
3 Rottweiler mhando
4 Rottweiler vana
5 Vane ngozi here?
Rottweiler imbwa hunhu
Yedu protagonist murume hombe ane hura, nehuremu hwe45 kusvika 60kg uye hurefu pakusvava kwe60 kusvika 68cm munhurume, uye kubva pa40 kusvika pa55kg nehurefu hwe55 kusvika 65cm mune munhukadzi. Muviri waro wakasimba asi wakaenzana, wakafukidzwa nejasi rebvudzi dema uye tema, isina mavara machena.
Makumbo akasimba kwazvo, akagadzirirwa kufamba nzendo refu pasina kuneta zvakanyanya. Musoro wakakura, nenzeve dzakarembera kumativi.
Iyo Rottweiler imbwa akangwara kwazvo, yehunhu tranquilo y mudziviriri , que anogara achida kushanda. Kunyangwe semufudzi, wemauto, kuteerera kana imbwa inofambidzana nayo, imhuka iyo yaunonakidzwa nekudzidzisa nayo, uye inoda kudzidza zvinhu zvitsva.
Kunyangwe iri yemagariro, Izvo zvakakosha kuti isu tizive kuti kuti tiwane kuvimba kweiyi furry isu tinofanirwa kuve tichiremekedza nguva dzese naye. Kusiyana neLabradors, vanoita shamwari mune imwe nyaya yemasekondi, iyo Rottweiler inoda imwe nguva yakati wandei. Asi, kana tangoona kuti anovimba nesu, tichava neakasarudzika shamwari padivi pedu.
MuAmerican Rottweiler zviri nyore rottweiler akaberekerwa muUnited States 🙂. Iwe unogona kunge wakaverenga kuti izvo zvakasiyana, asi hapana chekuona. Hongu ichokwadi kuti USA yakabereka zvisina tsarukano, asi ivo vachiri vakaenzana mhando.
Chinhu chakafanana chaizvo chinoitika neanofungidzirwa chiGerman Rottweiler sekune iyo American, nemusiyano wacho akaberekerwa mugermany uye kwete muUSA. Uye zvakare, munyika yeGerman tinowana iyo ADRK, inova kirabhu yerudzi urwu munyika iyoyo, inosarudzika kwazvo nembwa dzainobereka. Muchokwadi, ivo vanoita bvunzo dzepanyama uye dzakapenga varidzi vasati vagona kuzvibereka.
Izvozvowo hazvisizvo nezveRotweiller yeRoma sekune maviri apfuura, asi haisi rudzi rweayo kana. Ichokwadi kuti imbwa yakakura kukura, asi ichokwadiwo kuti iyi mhuka ingangotambura nehudyu dysplasia uye mamwe matambudziko ane hukama.
Iwe unogona kunge wakaona kushambadzira kubva kumutengesi uyo aiti ane tsvuku, bhuruu, kana albino rottweiler, kana kunyangwe vane vhudzi-refu vhudzi. Asi havasi ivo vakachena rottweilers sezvo ivo vasinga svike pakubereka zviyero. Muchokwadi, zvinofungidzirwa kuti iwo mhedzisiro yekuyambuka pakati peRottweiler uye imbwa dzembwa.
Vese maRottweiler, pakuzvarwa, vane muswe. Aya ndiwo maringe nemamiriro ayo ekushanduka-shanduka. Dambudziko nderekuti vanhu vajaira kuti vagurwe mukati memavhiki mashoma ekuberekwa, izvo nerombo rakanaka zvakatobvumidzwa muEurope.
Yechokwadi rottweiler ndiyo inoenderana nemhando yekubereka. Chikwata chega chega, senge American Kennel Club kana ADRK pachayo, yakanyora yayo muzuva rayo. Chero zvazvingaitika, kunyangwe tikamisa American Rottweiler padhuze neBritish, zvirokwazvo hatina kukwanisa kuvasiyanisa, nekuti hunhu hwavo hwakafanana.
Imbwa dzerudzi urwu imbwa dzinoyevedza, nechitarisiko chisina mhaka chakadai zvekuti unoda kuvatora mumaoko ako wovapurudzira kwechinguva. Asi nekuda kwehukuru hwayo uye kukura zvakakosha kwazvo kuti varege kupatsanurwa kubva kuna amai kusvikira vasvitsa mwedzi miviri nehafu kana mitatu. Kunyangwe, hongu, senguva yavo yekushamwaridzana, ndiko kuti, iyo nguva yavanofanira kusangana neimbwa nevanhu kuitira kuti mangwana vasazonzwa kusagadzikana, zvinotora kubva pamwedzi miviri kusvika kumitatu, zviri chaizvo Zvinokurudzirwa kuvashanyira kazhinji.
Kana zuva guru rasvika, muchengeti anofanira kuendesa kwatiri isu nemajekiseni kusvika zvino uye nemapepa emadzitateguru.
Vane ngozi here?
Kwenguva yakareba, uye nanhasi, maRottweiler anotendwa kuti ane njodzi. Hapana chingave chinopfuura icho kubva pachokwadi. Hunhu hwembwa yedu huchave hwakawanda kana kushoma kushamwaridzana zvichienderana nechengetedzo yainowana uye pamusoro pezvose marapirwo ayo. Mhuka inoremekedzwa uye inochengetwa sezvayakakodzera, nemoyo murefu nerudo, haizodi zvekuruma chero munhu.
Mutengo unoenderana nekuti inotengwa kupi. Nekudaro, pavanenge vari muchitoro chezvipfuyo vanogona kubvunza pakati pe200 ne300 euros, mune muchengeti ichave yakakodzera pakati 600 na700 ma euro.
Iwe unofungei nezve iyi furry?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Chii chakaita imbwa yeRottweiler
Ndakarera maRotts mashoma, anopfuura makumi mana, ayo asina kuenzaniswa nevarimi vehunyanzvi, asi mumakore angu makumi matatu ekuita izvi, handisati ndaona ruzivo rwandinofunga kuti rwakaipa. Vanhu vazhinji vanoziva kuti maAmerican Rottweilers akakura uye anorema, saka haaenderane nezviyero zvakatemwa nemakirabhu uye, zvakare, hazvienderane neiyo yekutanga Rottweiler yakabatwa muGermany kubva panguva dzeRoma. Chinhu chimwe chetecho chinoitika nemapittbulls nemamwe marudzi akaderedzwa nemaitiro ekuberekesa uye asina musoro, ayo anongoshatisa imbwa.
Nenzira yakadai, kuti kusimbisa kuti American Rottweiler yakafanana neyeGermany asi yakaberekerwa muAmerica, hazvina musoro zvachose. Vanofanira kugadzirisa ruzivo kuti vasavhiringika.
Zvekuita nembwa inoruma